Nzira yekudya sei Gourmet Pretzel? | Martech Zone
Nzira yekudya sei Gourmet Pretzel?
China, Gumiguru 18, 2007 China, Gumiguru 18, 2007 Douglas Karr
Musi weChipiri ndakatora rwendo rwechamupupuri kubva kuIndipolis kuenda kuTampa kuAtlanta uye kudzokera kuIndipolis. Pakanga pasina nguva yekushanyira shamwari kana mhuri (ini handina kana kuvafonera kuti ndivaudze)… kungo musangano uye kudzokera mumhepo. Ndege dzedu dzakagadzirwa ne Airtran uye ndakashamisika.
Zvichida chikamu chikuru kwazvo chekubhururuka chaisvika pasi mubhegi rangu diki remaumbirwo epamberi uye kuverenga pasuru yacho:
Ini ndiri mucheche wekushambadzira kwehungwaru uye ndanyatsowana kick iyi.
Tags: 2011blogworld expoblogworld los angelesWordpress yepamusoro bar
Blog Chiito Zuva: Mvura neMafuta
Tarisa uone uyu Makwikwi: Tora iMac kubva kuDevDad!
Gumiguru 19, 2007 pa 8:42 AM
Uri kutamba neni here! Iri serious packet here???? Varikuda zvekutengesa here? Chokwadi inoyevedza uye pachiso chako…Ndinoifarira….asi handina kuitenda pandakaiverenga.
Gumiguru 19, 2007 na2: 56 PM
IZVI zvinoshamisa. Neniwo ndiri musvo. Ini ndaizodya bhegi chete b/c yekurongedza uye ini handitomboda mapretzels.
Gumiguru 20, 2007 na1: 49 PM
Hungwaru, ndichavapa izvozvo, asi akangwara haabhadhare mabhiri. Ndinoshamisika kana inogadzira mabhuku.
Air Tran ine yakaringana niched musika / nzira dhizaini, saka kungangove kuedza kusvika kune vatengi, pane yebhizinesi chizvarwa kuedza.
Gumiguru 20, 2007 na9: 18 PM
Fungidzira kushamisika kwangu pandakaona chinyorwa chako chine mufananidzo webhegi repretzels randakanga ndichangobva kudya mazuva mashoma apfuura mundege kubva kuOhio kuenda/kubva kuOrlando, Fla! Kushambadza kunoshamisa, handizvo here?
Chaizvoizvo, chinyorwa ichi chaive chikonzero chakanaka chekuti ndikunyorere mhinduro nekuti ndaedza kushandisa fomu rako rekuonana kuti ndikubvunze kuti sei ndingave ndiine dambudziko nazvo pablog yangu. Ndakakumbira vanhu vasingaverengeki kuti vanditumire bvunzo meseji vachishandisa fomu rako asi hazvisi kushanda nechikonzero chakati. Haisi kuuya kune yangu email.
Chinhu chega chandinogona kufunga nezvacho ndechekuti email yandinoisa mufomu rako rekuonana ndiyo email yandiri kushandisa mune yangu admin panel. Icho chingava chikonzero here?
Sezvo usati wapindura meseji yangu kuburikidza neforomu yako yekubata, ndiri kufunga kana paine dambudziko nazvo kune chero munhu, kusanganisira ini ndiri kuishandisa.
Gumiguru 23, 2007 pa 7:29 AM
Handizivi kuti dambudziko ringave riri rei. Nditumire email kuburikidza nefomu rangu rekuonana nepeji yauri kutumira kubva. Iyo plugin inoshandisa WordPress 'mail kugona saka inofanirwa kunge iri kutumira meseji sezvaizongoita bhurogi rako.
Gumiguru 23, 2007 pa 7:49 AM
Ndaita sezvamakumbira ndikazadza fomu renyu, ndichishandisa email address yangu yakajairwa (stephen(at)sjhopson(dot)com Ndakamboedza kukubatai neforom yenyu asi handina kumbonzwa mhinduro kubva kwamuri.Zvinondinetsa kuti pane zviripo here. chimwe chinhu chakaipa nefomu rako rekuonana.
Sezvandakanyora mumeseji yangu kuburikidza nefomu rekuonana, pese pandaishandisa iyo email kero yataurwa pamusoro, avo vaida kusvika kwandiri kuburikidza neforomo rako rekuonana pablog rangu havana kumbowana meseji yavo. Handina kumbodzigamuchira.
Nekudaro, pandakachinja email kero yangu kuita sjhopson(at)yahoo(dot)com, mameseji kuburikidza nefomu rako rekuonana panzvimbo yangu saiti akauya zvakanaka.
Unofunga kuti izvi zvine chekuita here nenyaya yekuti Stephen(at)sjhopson(dot)com kero irikushandiswa sekero yeemail yemutariri? Izvozvo zvingava nechokuita nazvo here?
Ndanetsekana, handizive kuti chii chinonditadzisa kushandisa email kero yangu huru: stephen(pa)sjhopson(dot)com sekero inoshandiswa nefomu yako yekutumira mameseji.
Nov 23, 2009 na6:49 PM
Douglas, iniwo ndakanakidzwa neAirTran pretzels. Ingori nzira yakangwara yekuchengeta kushambadzira, mameseji emhando kunze uko.